ကြမ်းပြင်မီးအိမ်, စားပွဲတင်မီးအိမ်, မီးအိမ်အရိပ်, LED မီး Adapter ကို, စင်ကြမ်းပြင်မီးအိမ် - င့်တယ်သော
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-0755 28684337
E-mail ကို: georgexie@goodlylight-tech.com
LED ကို Adapter ကို
1-5W LED ကို Adapter ကို
6-12W LED ကို Adapter ကို
18-24W LED ကို Adapter ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့, ဒီဇိုင်နာသတ္တုကြမ်းပြင်ဆီမီးခွက်နှင့်သင်၏အတွင်းပိုင်းကိုထှနျးလငျး။ ထောင့်များနှင့် alcoves သို့ဇိမ်ခံထိုးသွင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပျူငှါနွေးထွေးသော, လေထုစာဖတ်ခြင်း Nook မှလွတ်မြောက်ရန်။ အမိုးခုံးသတ္တုဒီဇိုင်းများနှင့်အဘိဓါန် Moroccan-မှုတ်သွင်းမီးခွက်ကနေကြော့သတ္တုအလင်းအိမ်နှင့်အရပ်ရှည်ရှည်, သွယ်စတိုင်များရန်, ခေတ်ပြိုင်နှင့်ရိုးရာအလင်းရောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု Browse ။
စတိုင်အပေါ်အမြင့်, tripod ကြမ်းပြင်ဆီမီးခွက်ချက်ချင်းမဆိုအာကာသမှ classiness add! တစ်ထောင့်ကိုပေါ်လွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပျူငှါနွေးထွေးသောထို့အပြင်များအတွက်ဧည့်ခန်း၌သင်တို့၏ဆိုဖာဘေးမှာတဦးတည်းထားပါ။ တင့်တယ်အလင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်စုဆောင်းမှုထဲမှတောက်ပဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သင့်အိမ်ပျူငှါနွေးထွေးသောလုပ်ပါ။ သတ္တုချော, tripod အဆောက်အဦများသို့မဟုတ်သစ်သားအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူကြမ်းပြင်မီးခွက်စဉ်းစားပါ။
စားပွဲတင်မီးခွက်ကိုသင်ဒဏ်ငွေ-ညှိတဦးတည်းထက်ပိုနည်းလမ်းတွေထဲမှာအခန်း၏လေထုကြကုန်အံ့။ သူတို့ကသငျသညျမြားကိုလညျးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်နည်းနည်းဖြည့်စွက်နေချိန်မှာသင်ကလိုအပ်ဘယ်မှာနောက်ထပ်အလင်းပေး။ ငါတို့ဥစ်စာ, သင့် home.Metal စားပွဲတင်ဆီမီး Wood ကစားပွဲပေါ်မှာဆီမီးခွက်, USB ကစားပွဲပေါ်မှာဆီမီးခွက်ကိုအနည်းငယ်အပိုအရောင်, texture နဲ့အလင်းကိုထည့်သွင်းဖို့စတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ ...
မော်ဒန်နှင့်ကြော့မော့သောင့်တယ်သောအလင်းကနေဒီစင်ကြမ်းပြင်မီးအိမ်ဆိုအခန်းချက်ချင်းစတိုင်ကထပ်ပြောသည်။ ဤသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆီမီးခွက်တစ်ကြွယ်ဝသော, ကြော့ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီး, ထိုသို့သင့်ရဲ့စာအုပ်တွေ, ပန်းအိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံ frames များကိုပြသဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ် Two-tier ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်ဆ။ ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စတိုင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကြမ်းပြင်ဆီမီးခွက်လာမယ့်သင့်ရဲ့လက်တင်ကုလားထိုင်, ဆိုဖာသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရှိပရိဘောဂများကိုအခြားအပိုင်းအစအလွန်ကြည့်ရှုမည်။
တင့်တယ်အလင်းနည်းပညာ Co. , Ltd ။ 2015 built နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ customers.Justafter တစ်နှစ်မိုးလုံလေလုံခရီးဆောင်မီးခွက်မျိုးထောက်ပံ့အပေါ် Shenzhen.Weare အာရုံစိုက်မှာတည်ရှိပြီး, ငါတို့အောင်မြင်စွာဖောက်သည်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူခဲ့တဲ့မြင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးကို withexcellent အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံ price.Our Customer များ ChinaMainland ထဲမှာမသာဖြစ်ကြ, ဒါပေမယ့်လည်းထဲမှာ ဥရောပ, အမေရိကနှင့် ourcustomers ၏အရှေ့တောင် Asia.Most အတွက်သာမန် businesspartner ကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ဖို့, တစ်ပင်အားကောင်းကြားဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customersrequirements နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ကို Huizhou မှာအလင်းစက်ရုံ-ရန်း Champ LightingTechnology Co. , LTD မှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားပိုမို completiveprices နှင့်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် lamps.We ဖြည့်ဖို့ lampparts ကနေ, LED ကားမောင်းသူ မှစ. LED မီးခွက်ရန်, ကြွယ်ဝပြည့်စုံကြသည်အထိအမေရိကန်နိုင်ငံပစ်မှတ်, Walmart နှင့် BBB တစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။
2017 ခုနှစ်, manycustomers လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကျနော်တို့လေ့လာမှုဖြစ်ကြပြီး lineshopping အပေါ်မေးလ် orders.As လက်ခံမသာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြိုဆိုရမည်, ဒါပေမယ့်လည်း world.Nowour ထုတ်ကုန်ကျော်အားလုံးအတွက် Amazon နဲ့ Taobao, TMall.COM ပြီးတော့အပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာရောင်းချ JD .COM ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းများ, especiallyour သေးငယ်တဲ့အထုပ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်များကကြိုဆိုကြသည်။
တင့်တယ်အလင်း, ကရှေးခယျြပါနှင့်သင့်အလင်းကောင်းသောဖြစ်စေ yourgoodly ပါ!
R1120, Tiedong ပန်းခြံ, Ping တစ်လမ်း, Pinghu လမ်း, Longgang Destric, ရှန်ကျန်း, တရုတ်, 51811
ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: + 86-0755 28684337